SOLUTION iphutha "com.google.process.gapps inqubo iyekile" | Izindaba zamagajethi
U-Ignacio Sala | | AmaSelula, Software, Izifundiswa
Enye yezinkinga i-Android ebilokhu ibhekene nayo cishe kusukela yafika emakethe, kube ukuhambisana namadivayisi lapho efakwe khona, ngoba ayakhelwanga i-hardware ethile, njengokungathi yenzeka nge-Apple's iOS ne-iPhone. Lokhu, futhi akukho okunye, okuyiyona nkinga enkulu abakhiqizi abahlangabezana nayo lapho bebuyekeza amadivayisi abo enguqulweni entsha, kusukela akudingeki nje kuphela ukuthi basebenzise inguqulo ye-Android kumadivayisi abo, kepha futhi kufanele bangeze isendlalelo esijabulisayo sokwenza kube ngokwakho.
Kepha noma kunjalo, singahlala sithola ukungasebenzi kahle, kungaba ngenxa yenguqulo ye-Android engalungiselelwe ngokuphelele imodeli yethu yokugcina, noma ngenxa yesendlalelo sokwenza ngokwezifiso. Elinye lamaphutha ajwayelekile lithinta zombili izinhlelo zokusebenza nokusebenza kwesiginali. Kule ndatshana sizogxila kuyo Lungisa iphutha "com.google.process.gapps limise" iphutha, iphutha ezimweni eziningi elingasivumeli ukuthi silande izinhlelo zokusebenza ku-Google Play Isitolo.
Leli phutha laqala ukuvela ku-Android Kitkat 4.4.2 futhi kusukela lapho kubonakala sengathi abafana bakwaGoogle abakaze bazihluphe ngokuthola isisombululo esingaphoqeleli abasebenzisi ukuthi basebenzise i-inthanethi, ngoba nasezinguqulweni zakamuva ze-Android At isikhathi sokubhala le ndatshana siku-Android 8.0 Oreo, kuseseyinkinga engaphezu kokuphindaphindeka kumatheminali amaningi. Ngezansi sikunikeza izixazululo ezahlukahlukene zale nkinga, ukugwema isisombululo esinamandla kakhulu ngaso sonke isikhathi okubandakanya ukusetha kabusha kanzima idivayisi nokususa konke okuqukethwe kwayo.
1 Sula inqolobane yesicelo esisinikeza izinkinga
2 Susa izinhlelo zokusebenza zakamuva ozifakile
3 Susa izibuyekezo zakamuva ozilandile
4 Setha kabusha okuncamelayo kohlelo lokusebenza
5 Susa idatha kusuka kumasevisi we-Google Play
6 Idivayisi yokusetha kabusha kwasefekthri
Sula inqolobane yesicelo esisinikeza izinkinga
Uma leli phutha livela njalo njalo lapho uvula uhlelo lokusebenza, kungenzeka ukuthi uhlelo ngokwalo yilolo ukushayisa ngohlelo, ngakho-ke isenzo sokuqala okufanele sisithathe sula isilondolozi sayo.
Ukusula i-cache yesicelo, kufanele nje siye kuzilungiselelo> Izicelo bese ukhetha uhlelo lokusebenza okukhulunywa ngalo. Uma uchofoza kuso, asiyi ezansi futhi chofoza ku-Sula i-cache.
Susa izinhlelo zokusebenza zakamuva ozifakile
Lapho sithola inkinga kuhlelo lokusebenza ebelifakwe kudivayisi yethu isikhashana, kungenzeka ukuthi likhona kufayela le- uhlelo lokugcina esilufakile, into ngeshwa ejwayelekile ku-Android.
Ukuxazulula le nkinga yokusebenza, into yokuqala okufanele siyenze khipha uhlelo lokusebenza, kungaba ngqo ngezilungiselelo> Izicelo, noma ngohlelo lomuntu wesithathu olusivumela ukwenza lo msebenzi.
Susa izibuyekezo zakamuva ozilandile
Uma selokhu sifake isibuyekezo sohlelo lokusebenza, sesiqale ukusikhombisa lowo mlayezo, inkinga ingatholakala kufayela le- ukuvuselelwa kokugcina yohlelo lokusebenza esilufakile, ngakho-ke ukukhipha izinkinga, into yokuqala okufanele siyenze ukukhipha izibuyekezo.
Ukukhipha izibuyekezo, sibuyela kuzilungiselelo> Izicelo bese ukhetha uhlelo lokusebenza okukhulunywa ngalo. Phezulu, sithola inketho ye-Force stop futhi Khipha ukuvuselelwa. Ngokukhetha okwakamuva, idivaysi yethu izosusa noma imuphi umkhondo wesibuyekezo sokugcina bese ishiya uhlelo lokusebenza njengoba yayinjalo ekuqaleni, lapho yayisebenza kahle.
Setha kabusha okuncamelayo kohlelo lokusebenza
Isixazululo sokugcina esisiphakamisayo, ngaphambi kokungena kulokho mhlawumbe kuzoba ngumthombo wenkinga nokuthi ayihlobene nezinhlelo zokusebenza ngqo, kodwa ohlelweni, singasetha kabusha izintandokazi zezinhlelo zokusebenza. Ukusetha kabusha okuncamelayo kohlelo lokusebenza siya kuzilungiselelo> Izicelo bese uchofoza kuthebhu ethi Zonke.
Okulandelayo, siya kumenyu esekhoneni eliphezulu kwesokudla kwesikrini, emelwe amachashazi amathathu amile, bese ukhetha Setha kabusha izintandokazi. Ngaphambi kokuqinisekisa inqubo, i-Android izosikhombisa umyalezo oqinisekisa ukuthi okuncamelayo kwazo zonke izinhlelo zokusebenza ezikhubazekile, izaziso zezinhlelo zokusebenza ezikhutshaziwe, izinhlelo zokusebenza zezenzo ezizenzakalelayo, imikhawulo yedatha yangemuva yezinhlelo zokusebenza nayo yonke imikhawulo yemvume.
Lapho sesiyenzile le nqubo, futhi sesiqinisekisile ukuthi uhlelo olusinikeze izinkinga lusebenze kanjani futhi, kufanele futhi setha izilungiselelo ezizodwa Uhlelo lokusebenza ngalunye lwalunokufinyelela endaweni, idatha yeselula ...
Susa idatha kusuka kumasevisi we-Google Play
Uma ngemuva kokuzama zonke izinketho zangaphambilini, konke kubonakala kukhombisa ukuthi inkinga ayihlali kuzinhlelo zokusebenza uqobo, kepha ukuthi siyithola kumasevisi we-Google Play. Amasevisi we-Google Play uhlelo lokusebenza lwe-Android lelo ivumela ukuba nazo zonke izinhlelo zokusebenza zohlelo zihlala zisesikhathini futhi futhi ziqinisekisa ukuthi zonke izinhlelo zokusebenza zihlala zibuyekezwa kunguqulo yakamuva etholakalayo.
Ngokwenza lokhu, zonke izintandokazi nezilungiselelo ezisethwe ku-Google Play zizosulwa. ukubuyisela izilungiselelo ezizenzakalelayo. Ukusula idatha kusuka kumasevisi we-Google Play, siya kuzilungiselelo> Izicelo bese uchofoza ku-Google Play Services. Okulandelayo siya ku-Delete data, ngaphakathi kwesigaba se-Storage bese siqinisekisa ukususwa kwayo yonke idatha kusuka kulolu hlelo lokusebenza unomphela.
Idivayisi yokusetha kabusha kwasefekthri
Uma ingekho kulezi zindlela elungisa inkinga ye- com.google.process.gapps, kungenzeka, yize kungenzeki, ukuthi inkinga isenkingeni buyekeza okokugcina idivayisi etholakele, ngakho-ke ukuze sikunqande, kufanele sisethe kabusha idivayisi ngefekthri. Ngokwenza le nqubo, idivayisi izobuyela enguqulweni yasekuqaleni ye-Android eze ngayo emakethe.
Ukuze sibuyise izilungiselelo zasembonini zedivayisi, kufanele siye kuzilungiselelo> Isipele bese usetha kabusha bese ukhetha ukusetha kabusha idatha kwedatha. Le nqubo izosusa zonke izinhlelo zokusebenza, kanye nazo zonke izithombe nemininingwane ekulesi sibhedlela, ngakho-ke okokuqala kumele senze ikhophi yayo yonke idatha esifuna ukuyigcina, ikakhulukazi izithombe namavidiyo esiwathathile ngedivayisi, kusukela kamuva ngeke ibe khona indlela yokuzibuyisa a posteriori, ngezinhlelo eziningi esizivivinyayo.
Inketho eyodwa yokwenza le khophi ukufaka ifayela le- imemori khadi kudivayisi bese uhambisa zonke izithombe namavidiyo, kanye nedatha, esifuna ukuyigcina, ukuze siphinde sibe nayo lapho sibuyisela idivayisi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Ungayilungisa kanjani inqubo "com.google.process.gapps iyekile" iphutha
Sawubona, ngithola leli phutha kepha alivumeli nokuthi ngifake izilungiselelo noma kuphi ngoba umyalezo uvela futhi ... uma usezilungiselelweni ... izilungiselelo zimile ... njalonjalo nakho konke engizama ukukufaka. Ngakho-ke isixazululo osinikeza kulesi sithangami asivumelekile kimi. Ingabe ikhona ifomula yokusetha kabusha ithebhulethi yasefektri ngaphandle kokufaka noma iyiphi inketho? ngoba angisiboni esinye isisombululo ... uma kukhona osaziyo ngingakuthokozela uma ungangisiza
Ngivumelana nokuphawula kwangaphambilini, futhi incazelo abayinikezayo ayinangqondo ngoba uma inkinga kungukuthi ayinikezi ukufinyelela ngoba uhlelo lokusebenza lumisiwe, okushoyo akunangqondo ngoba umuntu ungena kanjani ukususa idatha ye-cache, uma ngamunye uhlelo lokusebenza likutshela okufanayo,
Ngivumelana nokuphawula kwangaphambilini, futhi incazelo abayinikezayo ayinangqondo ngoba uma inkinga ukuthi ayinikezi ukufinyelela ngoba uhlelo lokusebenza lumisiwe, kuyabheda okushoyo ngoba umuntu ungena kanjani ukususa idatha ye-cache, uma uhlelo lokusebenza ngalunye lusho okufanayo, mmmmm
Amadili aphambili we-Amazon wanamuhla (31-01-2018)